Ụbọchị ọhụrụ a na UNWTO bụ nnukwu nzọụkwụ maka njem, njem nlegharị anya na akụ na ụba ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Ụbọchị ọhụrụ a na UNWTO bụ nnukwu nzọụkwụ maka njem, njem nlegharị anya na akụ na ụba ụwa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Taa, mba 85 tụrụ vootu maka odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili ga-ekwenye na ọ ga-edu World Tourism Organisation maka afọ 4 ọzọ.
Taa bụkwa ụbọchị na-enweghị mba, enweghị onye nnọchiteanya, na onye na-eme nchọpụta ga-enwe ike ịjụ ajụjụ nkwenye a ebe ọ bụ na ọ bụ eziokwu, nzuzo na ọchịchị onye kwuo uche ya. Naanị mba 29 tụrụ vootu megide nkwenyeghachi ya.
Nke a abụghị naanị mmeri maka Mr. Zurab Pololikashvili kamakwa maka ụlọ ọrụ UN jikọtara ọnụ, maka WTN Decency in Election" mkpọsa, na maka abụọ bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO - Dr. Taleb Rifai na Francesco Frangialli - bụ ndị kpọpụrụ mgbịrịgba mkpu n'ihu ọha na-agbagha usoro ntuli aka ziri ezi maka otu ụlọ ọrụ ha jere ozi ruo ọtụtụ afọ.
Mr. Pololikashvili meriri ntuli aka ahụ, otu dike pụtara.
Onye dike na ntuliaka taa bụ Hon. Gustav Segura Costa Sancho, Minista njem nlegharị anya maka Costa Rica, mere ka ntuli aka ziri ezi kwe omume. N'aha Costa Rica, ọ rịọrọ votu nzuzo achọrọ nke ukwuu iji kwado ma mechie ihe ọ bụla ga-esi na ya pụta na usoro nke taa. Na-enweghị ntuli aka nzuzo, ígwé ojii nke aghụghọ ga-adịgide n'ime usoro a maka afọ anọ na-esote.
A kpochapụrụ enyo ọ bụla maka ụdị aghụghọ a ugbu a. Onye odeakwụkwọ ukwu na oge nke abụọ ya nwere ike itinye uche zuru oke n'idu njem nlegharị anya maka mba niile so na ya.
Ọ gaghị enwe ọrụ pụrụ iche n'ebe mba ndị nọ na kansụl ndị isi nọ. A gaghị enwe ntuli aka ọzọ. Ọnọdụ ya ugbu a dị nchebe ma mechie ya ruo njedebe nke oge nke abụọ ya. Ọ nwere ike itinye uche ugbu a na-eduga njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ site na nnukwu ihe ịma aka nke ngalaba a na-eche ihu.
Nke a bụ mmeri maka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ n'ozuzu.
Ọ ga-enyekwara odeakwụkwọ ukwu aka iwulite ihe nketa ya. Asịrị na-ekwu na atụmatụ ya bụ ịzọ ọkwa praịm minista Georgia ka oge UNWTO gwụchara.
Yabụ taa bụ ụbọchị mmeri/ mmeri/merie/ mmeri maka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. Ugbu a, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụghị nanị ịkele Mr. Zurab Pololikashvili maka imeri ntuli aka ziri ezi na nzuzo, ma ọ bụ oge maka onye ọ bụla na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ iji soro UNWTO rụọ ọrụ.
N'ime ụwa nke ndị mmeri, e nwekwara ụwa nke ndị mere nkwa efu. Dịkarịa ala, mba 35 kwadoro n'azụ ihe nkiri iji mee otu ihe, mechara mee ihe na-abụghị. Ikekwe nke a nwere ike ịkpọ "ndọrọ ndọrọ ọchịchị," na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mwute ikwu na-adaberekarị na anwụrụ ọkụ na nkwa efu. Nke a adịghị ka ọ dị iche n'ọtụtụ ngalaba, mba, ma ọ bụ mmekọ.
Juergen Steinmetz nke eTurboNews, na oche nke Network Tourism Network, chere na e wepụrụ nnukwu ibu site na ngalaba njem nlegharị anya taa. Oge erugo itinye esemokwu na nkatọ n'azụ anyị wee nyere UNWTO aka ịnọgide na-aga n'ihu maka ọdịmma njem nlegharị anya ụwa.
Mazị Pololikashvili kwuru, sị: “Na mpaghara ụwa niile, ọrịa na-efe efe emeela ka o doo anya mkpa ngalaba anyị dị - maka uto akụ na ụba, maka ọrụ na azụmaahịa, yana ichekwa ihe nketa okike na ọdịbendị. Anyị ga-eji ohere a mee ihe kachasị mma - iji gbanwee ihu ọma ka ọ bụrụ nkwado doro anya. "
Steinmetz kwetara wee nye ya Mr. Zurab Pololikashvili na UNWTO nkwado ya na nkwado ya zuru oke.
Steinmetz kwubiri, "Maka ọtụtụ mba ndị na-adabere na njem nlegharị anya, inwe otu olu zuru ụwa ọnụ, na mmemme a na-ahazi nwere ike ịbụ nnukwu nzọụkwụ na-aga n'ihu maka akụnụba ndị dị otú ahụ", Steinmetz kwubiri.